“Novonoin-dRy Zareo Ny Eid ao Iràka” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Aogositra 2013 6:40 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, فارسی, Ελληνικά, English
91 ny isan'ny maty ary 323 ny isan'ny naratra tamin'ny fipoahana baomba 17 samihafa nanerana an'i Iràka tamin'ny omaly alina (9 aogositra).
Nitranga tany an-tsena, efitrano fisakafoanana sy fisotroana maro ny fipoahana izany nanampy trotraka ny fifanenjanana ara-pivavahana ao Iràka. Araka ny tatitra tao amin'ny BBC, ity volana ity no “Ramadan nahafatesana olona be indrindra, nahitana olona mihoatra ny 670 maty.” Nanatsonga ny voalazan'ny Firenena Mikambana, nanome isa hafa milaza fa “1057 ny isan'ny Irakiana maty ary 2326 ny naratran'ny fanafihana tamin'ny volana jolay, isa avo indrindra ao anatin'ny iray volana hatramin'ny 2008″ ny New York Times.
Mpanangom-baovao ao amin'ny Al Jazeera antsoina hoe Rawya Rageh nisioka hoe :
Tsy manan-kolazaina.. 91 ny isan'ny olona maty ao Iràka izao.. 323 ny naratra..
Efa nisioka toy izao izy ora iray monja nialoha io:
Izao no azon'ny Irakiana tao anatin'ny andro faran'ny Eid: Fipoahana 13, maty 67, maratra 218.. Hifarana ve izy ity?
Ny fankalazana ny Eid no faratampon'ny volana masina fifadian-kanina Ramadany, izay fotoam-pifaliana sy fivoriam-pianakaviana amin'ny ankapobeny. Saingy tsy izany no nitranga ho an'ny Irakiana, sy ny Arabo maro raha amin'ity raharaha ity. Mitaraina ilay mpikaroka Irakiana monina ao London antsoina hoe Hayder al-Khoei:
“Maty ny Eid ho an'ny fireneko”
Tamin'ny sioka manaraka no nilazany ihany koa :
Metyhieritreritra ianao fa ny fisesisesin'ny fanapoahana baomba fiara no hanery ny mpitandro ny filaminana hanova ny tehina majika. Rahoviana no ho leon'ny leo?
Nizara ny sarin'ny tabilaon'ny birao ny sefon'ny AFP ao Iràka, izay ahitana ny isan'ny fiara natao baomba, ny isan'ny maty sy ny maratra. Hoy ny fanamarihany:
Lasa zavatra fahita mahazatra loatra eto amin'ny biraon'ny AFP eto Baghdad
Nataony lisitra ny toerana nipoahan'ny baomba tao Baghdad:
Manaraka akaiky ny fandehan'ny baomba fiara ao Husseiniyah, Shaab, Kadhimiyah, Baghdad Jadidah, Amil, Dura, Saidiyah ary Jisr al-Diyala manodidina an'i Baghdad ny @AFP
Any amin'ny toera-kafa any Iràka:
Fidarohana an'i Iràka androany tao Baghdad, Tuz Khurmatu, Hilla, Neel (akaiky an'i Hilla), Qaiyarah, ary al-Jadaa (atsimon'i Mosul). 41 ny maty, 176 ny naratra
Nahatohina ny tao amin'ny tambajotra sosialy ny hamaroan'ny fanapoahana baomba. Maneho ny loiloiny avy any Bahrain ny bilaogera Ali Al Saeed:
Mbola mitohy ao Iràka ny famonoana amin'ny anaran'ny antokom-pivavahana ary tsy misy mpitondra Arabo iray mba maneho ny fanoherany. Mankaloiloy.
Ary avy any Frantsa, mba tohina amin'ny tsy firaharahian'ny olona amin'izay mitranga any Iràka ihany koa i Ammoun. Taorian'ny nizaràny rohy maromaro momba ny vaovao mafàna any Iràka, nanao fanamby tamin'ny mpanaraka azy ao amin'ny Twitter izy:
Eny, Nofenoiko ny vaovaon’ Iràka ny randram-baovaonareo aho satria tsy hisy olona hafa hanao izany. Raha tsy faly amin'izany ianareo dia ialào [aho] dia ento any amin'ny konsiansinareo izany.